Visme: Fitaovana matanjaka hamoronana votoaty hita maso mahatsikaiky | Martech Zone
Rentsika rehetra fa sarin-teny iray alina ny sary iray. Mety tsy ho marina izany ankehitriny satria isika mahita ny iray amin'ireo fikomiana amin'ny fifandraisana mampientam-po indrindra tamin'ny vanim-potoana rehetra - sary iray izay anohizan'ny sary ny teny. Ny salanisan'ny olona dia tsy mahatadidy afa-tsy ny 20% amin'ny zavatra novakiany fa ny 80% amin'izay hitany. Ny 90% -n'ny fampahalalana ampitaina amin'ny ati-dohantsika dia hita maso. Izany no nahatonga ny atiny hita maso ho fomba tokana tena lehibe ifandraisana, indrindra eo amin'ny tontolon'ny asa ankehitriny.
Mieritrereta kely fotsiny momba ny fiovan'ny fahazarana mifampiresaka tato anatin'ny folo taona lasa:
Tsy miteny intsony izahay hoe gaga zavatra iray; mandefa emoji fotsiny na GIF an'ny mpilalao tianay izahay. Ohatra: Ny fihomehezan'i Natalie Portman dia mamely ilay mahazatra hoe “lol.”
Tsy manoratra intsony izahay fa manao dia mandritra ny androm-piainana miaraka amin'ny orinasa lehibe; manao selfie izahay:
Tsy mahita fanavaozam-baovao tsotra sy mifototra amin'ny lahatsoratra amin'ny Facebook sy Twitter intsony izahay; mahita horonantsary izahay - na izany aza live broadcasts - nalaina tamin'ny fitaovana finday:
Ao anatin'ity fiovana ara-kolontsaina iainantsika ity - izay nanjary mpanjaka vaovao manerantany ny atiny hita maso – tsy ho tsara ve ny fananana multitool votoaty hita maso izay afaka manao ny asa mafy rehetra amin'ny famoronana sary hitaona atiny ho antsika?
Ka inona no tokony hataonao? Manakarama mpamorona sary lafo vidy na mandany ora maro hanandramana hianatra mampiasa rindrambaiko famolavolana sarotra? Eto no misy an'i Visme sary.
Fitaovana famoronana votoaty hita maso iray manontolo, Visme dia tonga lafatra ho an'ny mpivarotra, mpandraharaha, bilaogera ary fikambanana tsy mitady tombontsoa mitady hamorona karazan-tsary rehetra amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo marketing sy fitaovam-pampianarana.
Andao hojerentsika izay ataony sy ny fomba hanampiany ny orinasanao:
Nanjary mora ny fampisehoana sy ny sary
Raha fintinina, Visme dia fitaovana mora ampiasaina, mitete-ary-milatsaka izay afaka manampy anao mamorona fampisehoana sy infografika mahavariana ao anatin'ny minitra vitsy.
Raha reraky ny fampiasana fampisehoana PowerPoint taloha ianao dia manolotra maodely voafaritra tsara sy avo lenta i Visme, samy manana ny firaketany ny fizotrany slide.
Na, raha te-hamorona sary an-tsary maharesy lahatra ianao, fampitahana ny vokatra na ny tatitra na famerenana infographic anao manokana, dia misy maodely am-polony namboarina ho matihanina hisafidianana ny tongotra ankavanana.
Fonosina sary masina maimaimpoana an'arivony sy fitaovana grafofaonina, ary sary maimaimpoana an-tapitrisany sy endritsoratra an-jatony, manome anao izay rehetra ilainao i Visme mba hanombohana mamorona ny tetikasan-tsary mahasarika anao manokana - zavatra hireharehanao hizara amin'ny tambajotran-tserasinao sy mpitsidika tranonkala.
Ataovy namboarina na inona na inona
Iray amin'ireo hatsaran-tarehy hiara-hiasa amin'i Visme ny hery omeny ny mpampiasa hamorona sary nomerika izay tonga ao an-tsaina ao amin'ny faritra famolavolana azy manokana.
Amin'ny fampiasana ny safidin'ny refy ampiasain'ny mpampiasa dia afaka mamorona na inona na inona izy ireo, manomboka amin'ireo meme azo zaraina amin'ny media sosialy ka hatrany amin'ny flyers, sora-baventy ary afisy na fitaovana fampiroboroboana hafa.
Manampia sary mihetsika sy fifandraisana
Endri-javatra iray hafa izay mampiavaka an'i Visme amin'ny ambiny dia ny fahafahany mampiditra sary mihetsika na mampifandray ny singa rehetra, toa ny hita eto ambany amin'ny iray amin'ireo tetikasan'ny mpanjifanay. Na te hampiditra horonantsary, endrika, fanadihadiana na quiz amin'ny votoatanao maso ianao, Visme dia mamela anao hampiditra singa saika noforonina tamin'ny fitaovana an'ny antoko fahatelo.
Ho fanampin'izany, azonao atao ny mamorona bokotra antso-to-action anao manokana, araka ny hita etsy ambany, hitondrana mpitsidika ny pejy fiakarana na ny endrika fitarika mitarika.
Mamoaha ary zarao
Ary farany, satria mifototra amin'ny rahona ny Visme, azonao atao ny mamoaka ny tetikasanao amin'ny endrika isan-karazany ary zarao na aiza na aiza. Azonao atao ny misintona ny tetikasanao ho sary na rakitra PDF; na raha tianao dia azonao atao ny mampiditra azy ao anaty tranokalanao na bilaoginao; avoaka amin'ny Internet mba hahafahanao miditra amin'ny toerana rehetra; na misintoma ho HTML5 hanolotra ivelan'ny serasera (amin'ny tranga misy fifandraisana maloka na tsy misy Wi-Fi mihitsy).
Tsiambaratelo sy Analytics
Misy ihany koa ny safidy hitazomana ny tetikasanao tsy miankina amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny safidy Access voafetra na ny teny miafina miaro azy ireo.
Tombony lehibe iray hafa: azonao atao ny miditra amin'ny statistikan'ny fomba fijery sy ny fitsidihana ny infografia anao amin'ny toerana iray. Hanome anao ny fomba fijerinao marimarina kokoa ny haavon'ny fifamatorana, indrindra rehefa manapa-kevitra ny mpitsidika hampiditra ny infografika amin'ny tranokalany manokana.
Miaraha miasa amin'ny ekipa
Miaraka amin'ny mpampiasa 250,000 mahery, maro amin'izy ireo orinasa lehibe toa ny Capital One sy Disney, Visme dia nanangana ny drafitry ny ekipany vao haingana hanampiana ireo mpampiasa hiara-miasa amin'ny tetikasa amin'ny fomba mahomby kokoa, na ao anatiny na ivelan'ny fikambanan'izy ireo.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny rehetra dia ny Visme dia maimaimpoana ho an'izay te hanomboka hamorona votoaty hita maso amin'ny fitaovana famolavolana fototra. Ho an'ireo izay te-hamaha modely premium ary hiditra amin'ireo fiasa mandroso, toy ny fitaovana fiaraha-miasa ary Analytics, ny drafitra karama dia manomboka amin'ny $ 15 isam-bolana.
Vakio bebe kokoa momba ny ekipan'ny Visme Midira ho an'ny kaonty Visme MAIMAIMPOANAO
Fampahafantarana: a Visme partner ary mampiasa ny rohin'ny namako ato amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: bokotramiantso amin'ny asafamoronana tabilaofitaovana tabilaoctafitaovana infographicfitaovana instagramfitaovana fampisehoanavismevotoaty hita masosehatra votoaty hita masoweb content
Nayomi Chibana dia mpanao gazety ary mpanoratra ho an'ny VismeIvotoerana fianarana Visual Visual. Manana MA amin'ny asa fanaovan-gazety sy haino aman-jery avy amin'ny University of Hamburg any Alemana izy ary tonian-dahatsoratry ny magazine fanadihadiana amerikana latina nandritra ny taona maro. Ankoatry ny fanaovana fikarohana momba ny fironana tato ho ato amin'ny haino aman-jery mitantara endrika lava be dia be izy, tiany ny mandeha sy mianatra momba ny kolontsaina hafa.